बढिरहेको सुनको मूल्य एक्कासी साताको अन्तिम दिन घट्यो यसरी ! पढ्नुहोस्::Nepal's Online News Portal
बढिरहेको सुनको मूल्य एक्कासी साताको अन्तिम दिन घट्यो यसरी ! पढ्नुहोस्
काठमाडौं,२९ चैत । साताको अन्तिम दिन आज शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला ६० हजार दुई सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुनको मूल्य आज छ सय रुपियाँले घटेर ५९ हजार छ सय रुपियाँमा कारोबार भएको हो ।
त्यसैगरी, आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोलामा ५९ हजार तीन सय रुपियाँमा कारोबार भएको छ । महासंघले आज प्रति १० ग्राम छापावाला सुनको मूल्य ५१ हजार एक सय रुपियाँ कायम गरेको छ भने प्रति १० ग्राम तेजावी सुनको मूल्य ५० हजार आठ सय ४५ रुपियाँ कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, चाँदीको मूल्य दस रुपियाँले बढेर सात सय २० रुपियाँमा कारोबार भएको छ । महासंघले आज प्रति १० ग्राम चाँदीको मूल्य छ सय रुपियाँ कायम गरेको छ ।
फेरी एक्कासी बढ्यो सुनचाँदीको भाउ , तोलाको कति ?
काठमाण्डौ – सुनको भाउ सोमबार तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढेको छ । सुन सोमबार तोलाको ५९ हजार ६ सय निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार तोलाको ५९ हजार १ सय रुपैयाँमा...
कति छ आज सुन र चाँदीको मूल्य ?
काठमाडौं, ३ बैशाख । मंगलबार पनि नेपाली बजारमा सुनचांदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । २०७६ सालको पहिलो कारोबार दिन बैशाख २ गते सोमबार पनि सुनको मूल्य स्थिर रहेको थियो । गत साताको छैटौं दिन शुक्रबार...
किन्ने होइन त अब सुन ? नयाँ वर्षमा ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ? हेर्नुहोस् …
काठमाडौं । आज आईतबार सुनको मूल्य ह्वात्तै ओरालो लागेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि छापावाल सुन ६० हजार २ सय...
तातोपानी नाका आगामी जेठ १७ गते देखि सञ्चालनमा आउने
सिन्धुपाल्चोक । २०७२ काे विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाको सरकारी उच्चस्तरीय टोलीले मंगलबार स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख, सांसदलगायतको टोलीले यो...
सुनको मूल्य झन् झन् उकालो !!!
काठमाडौं । आज मंगलबार सुनको मूल्य झन् उकालो लागेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ६० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि छापावाल सुन प्रतितोला ६० हजार ...
फेरी एक्कासी बढ्यो सुनचादीको भाउ , कति पुग्यो त ? पढ्नुहोस्
काठमाडौँ, २५ चैत । सोमबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको भाउ बढेको छ सोमबार सुन प्रति तोला २ सय रुपैयाँले बढेर ६० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । तर...
एक्कासी आइतबार सुनको मूल्यमा यस्तो परिवर्तन ? कति पुग्यो त ?
काठमाडौं, २४ चैत । आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । आइतबार सुन प्रति तोला ३ सय रुपैयाँले बढेर ५९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको...
अमेरिकी डलरसहित सबै देशको मूल्य लाग्यो उकालो , पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । आज शनिबार अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको मूल्य उकालो लागको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ४६ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय ११ रुपैयाँ ६ पैसा...